Akụkọ Bible: Eke na Egwurugwu Mbụ - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
Ị̀ MA ihe mbụ Noa mere mgbe ya na ezinụlọ ya si n’ụgbọ ahụ pụta? Ọ chụụrụ Chineke àjà, ma ọ bụ nye ya onyinye. Ị pụrụ ịhụ ka ọ na-eme nke a na foto dị n’okpuru ebe a. Noa ji ụmụ anụmanụ a chụọrọ Chineke àjà iji kelee ya maka ịzọpụta ya na ezinụlọ ya n’oké iju mmiri ahụ.
Ì chere na onyinye ahụ dị Jehova mma? Ee, ọ dị ya. Ọ gwakwara Noa na ya agaghị eji iju mmiri bibie ụwa ọzọ.
Ọ dịghị anya, ala niile wee kọọ, Noa na ezinụlọ ya wee malite ndụ ọhụrụ mgbe ha pụtasịrị n’ụgbọ ahụ. Chineke gọziri ha wee sị ha: ‘Unu ga-amụ ọtụtụ ụmụ. Unu ga-abakwa ụba ruo mgbe mmadụ ga-ebizu n’ala niile.’
Ma, mgbe ndị mmadụ ga-emesị nụ banyere oké iju mmiri ahụ, ha pụrụ ịtụ egwu na a ga-enwe iju mmiri yiri ya ọzọ. N’ihi ya, Chineke nyere ihe ga na-echetara ndị mmadụ nkwa o kwere nke bụ́ na ya agaghị eme ka iju mmiri rikpuo ụwa ọzọ. Ị̀ ma ihe o wepụtara iji na-echetara ha? Ọ bụ eke na egwurugwu.
A na-ahụkarị ya na mbara igwe n’oge anyanwụ na-amụ mgbe mmiri zosịrị. Ha pụrụ inwe ọtụtụ àgwà mara mma. Ị̀ hụtụla otu? Ị̀ na-ahụ nke dị na foto a?
Chineke wee sị: ‘Ana m ekwe nkwa na iju mmiri agaghị ebibi mmadụ niile na anụmanụ niile ọzọ. M na-etinye eke na egwurugwu m n’igwe ojii. Mgbe ọ pụtara, m ga-ahụ ya wee cheta nkwa nke a mụ onwe m kwere.’
Ya mere, mgbe ị na-ahụ eke na egwurugwu, gịnị ka ọ na-echetara gị? Ọ bụ nkwa ahụ Chineke kwere na ya agaghị eji oké iju mmiri ebibi ụwa ọzọ.
Jenesis 8:18-22; 9:9-17.
Dị ka e gosiri na foto a, gịnị ka Noa buru ụzọ mee mgbe o si n’ụgbọ ahụ pụta?
Olee iwu Chineke nyere Noa na ezinụlọ ya mgbe Iju Mmiri ahụ gasịrị?
Olee nkwa Chineke kwere?
Mgbe anyị hụrụ eke na egwurugwu, gịnị ka o kwesịrị ichetara anyị?
Gụọ Jenesis 8:18-22.
Olee otú anyị pụrụ isi na-esurere Jehova ‘ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ’ taa? (Jen. 8:21; Hib. 13:15, 16)
Gịnị ka Jehova kwuru banyere obi mmadụ, gịnịkwanụ ka anyị kwesịrị ịkpachara anya banyere ya? (Jen. 8:21; Mat. 15:18, 19)
Gụọ Jenesis 9:9-17.
Ọgbụgba ndụ dị aṅaa ka Jehova so ihe niile e kere eke nọ n’ụwa nwee? (Jen. 9:10, 11)
Ogologo oge hà aṅaa ka ọgbụgba ndụ eke na egwurugwu ahụ ga-adị irè? (Jen. 9:16)
Olee otú Chineke si chebe Noa na ezinụlọ ya n’oge o ji iju mmiri bibie ụwa?